सुदूरपश्चिममा बज्यो खतराको घण्टी, के गर्दैछ प्रदेश सरकार ? — Sanchar Kendra
सुदूरपश्चिममा बज्यो खतराको घण्टी, के गर्दैछ प्रदेश सरकार ?
काठमाडौं । देशभर कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा घटेको थियो तर पुनः एकाएक संक्रमणको दर पुन उकालो लागेको छ । प्रदेशका २ वटा अस्पतालमा रहेका प्रयोगशालाको परीक्षाण नतिजामा मात्रै पछिल्लो २४ घण्टामा थप ९२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
केन्द्र सरकार मातहत रहेको डडेल्धुरा अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार माातहतको सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालाको परीक्षण नतिजामा ९२ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो । डडेल्धुराका अस्पतालको परीक्षण नतिजामा ५६ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । डडेल्धुरा अस्पतालको नतिजाअनुसार पोजेटिभ देखिनेमा सबैभन्दा बढी अछाम जिल्लाका छन् ।
अछामको साँफेबगर नगरपालिकाका २५, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका १० र मल्लेख गाउँपालिकाका गरी ३६ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । उता डोटीमा शिखर नगरपालिकामा १३, केआईसिंह गाउँपालिकामा २ र जोरायल गाउँपालिकामा १ गरी १५ जना, बैतडीको शिगास गाउँपालिकामा २ र डडेल्धुराको नवदूर्गा गाउँपालिकामा २ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालको नतिजामा कोरोना पोजेटिभ देखिएका ३६ जनामध्ये सबैभन्दा बढी ३४ जना कैलालीका छन् । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका ३० र गोदावरी नगरपालिकाका ४ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । यस्तै, अछामको बान्नीगढी जयगढका २ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ ।
गत २४ घण्टाको अवधिमा डडेल्धुरा अस्पतालमा २ सय २९ र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ४ सय २६ जनाको आरटी पीसीआर विधिबाट नमूना परीक्षण गरिएको थियो । यस्तै सुक्रबार दिउसोसम्म नेपालमा थप ८ सय ३८ जना कोरोना स्नाक्रमति थपिएका छन् । यो संगै नेपालामा कोरोना संक्रमितको संख्या ३० हजार ४ सय ८३ पुगेको छ ।
यस्तै सुक्रबारदिउसोसम्म कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप ११ जनाको मृत्यु भएको छ । यो संगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ३७ जना पुगेको छ । यो साता नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मर्नेको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । कोरोनाले देशमा महामारीको रुप लिन लागेको भन्दै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित ३८ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।